I-alamu ye-Two Pandora DXl 3900 ithuthukiswa yinkampani yaseRussia ekukhiqizeni izesekeli zezimoto ngegama elifanayo Pandora. Lo mfanekiso ungummeleli wezizukulwane zakamuva zokuphepha. Inzuzo enkulu yemoto ye-alamu yindlela yokuxhuma ngesikhathi esisodwa kuma-CAN-amabhasi amabili. Ngenxa yalesi sici, i-Pandora DXL 3900 ingafakwa ezimotweni ngokusebenza komyalo othuthukisiwe. I-alamu eyakhelwe ngaphakathi I-LIN-port ikuvumela ukuthi uyivumelanise namanothi amaningi athandwayo ezakhiwo zokuphepha zemakethe yesibili.
Izici ze-car alarm system
Imodi ye-System Valet ikuvumela ukuba ukhubaze uhlelo lokulwa ne-Pandora DXl 3900 CAN GSM. Isenzo esifanayo singenziwa ngokufaka ikhodi yomuntu siqu. Imoto ivikelwe ngokusebenzisa amadivaysi ahlukahlukene kanye namamojula azayo agcwaliswe nge-multifunctional security complex of power efanayo.
Ukusebenza kwazo zonke izinto ezifakiwe kungalawulwa ngumnikazi wemoto njalo ngenxa yemisebenzi ekhethekile enikezwe abakhi be-Pandora DXL 3900 uhlelo.
Amathuba ama-alamu amanga wesistimu anciphisa uhlelo lwesiphenyo senzwa. Umnyango wemoto awukwazi ukuphulwa ngenxa yesistimu esuselwe ekuphenduleni.
Umsebenzi ohlanganisiwe we-immobilizer onamathegi angenantambo ukwandisa izinga lokuvikelwa kwemoto. I-alamu ikuvumela ukuba ulalele izenzakalo ezenzeka ngaphakathi kwezemoto. Imiyalo yokufaka imiyalezo ye-Pandora DXL 3900 inikezela ukuthi kungenzeka ukulungisa nokuhlela izinzwa zesistimu ngefoni ephathekayo.
Ikhodi yokubhala yomuntu siqu ingashintshwa ngokuthanda komsebenzisi, okuzokwandisa kakhulu izinga lokuvikelwa nokuphepha kwemoto. Ukusebenza kwe-alamu yemoto ikuvumela ukuthi ulawule amadivayisi wesithathu.
Izakhiwo zokuphepha Pandora DXL 3900 zisebenza njengemishini ejwayelekile yemoto. I-multi-system high-speed interface ikuvumela ukuba ufake uhlelo lwe-alamu kunoma iyiphi imoto yanamuhla.
I-module ye-CAN / LIN engakhelwe ngaphakathi
Ukuhlanganiswa okusheshayo nokulula kwezingxenye zemoto ye-alamu kwisistimu ye-electronic yomshini kungenzeka ngenxa ye-CAN / LIN module. Zonke izinhlobo zezimoto zanamuhla zinezikebhe ezidingekayo.
I-module ye-GSM / GPRS
Imiyalo yePandora DXL 3900 iqukethe ulwazi mayelana ne-GSM-modem edidiyelwe i-Telit 868, ekhulisa kakhulu amandla we-telematics enkimbinkimbi yokuphepha. Ama-alamu e-Automobile angalawulwa kusuka efonini ephathekayo: kusukela kugajethi, ungathumela izimpawu, thola izaziso ngama-alamu, nohlelo futhi ulungiselele ama-alamu.
Ukuvikelwa kwe-Two-Way Protection
Amasistimu okubonakalisa isizukulwane sakamuva afakwe uhlobo olufanayo lokuvikela i-crypto. Esikhathini sohlelo lwe-Pandora DXL 3900, i-transceiver ye-2.4 GHz yamuva isifakiwe, esebenza kwimodi engenawaya futhi ilawula wonke amamojula wokuthambisa nokudluliswa kwe-plug-in. Umthamo oyinhloko kanye nekhiya eliyisihluthulelo livumelanisiwe kumodi yokusebenzisana ngokusho komthetho "we-alien". Akunakwenzeka ukuphazamisa uhlelo lolu hlobo nganoma iyiphi yezindlela ze-digital ezikhona.
Umsebenzi wokuvikelwa komnikazi wemoto waqala ukusebenza embonini ye-Pandora DXL 3900. Ekuphenduleni kwenkimbinkimbi yokuphepha, abasebenzisi bathi i-SOS key iyinkinobho ye-alamu, ukucindezela kwayo esimweni esibi kakhulu futhi lapho kwenzeka ingozi yokuphila kuqala inqubo yokuzibiza zonke izinsizakalo eziphuthumayo Futhi abantu abanobunombolo babo abafakwe ngumnikazi wemoto enkumbulweni yedivayisi. Bonke abamukeliwe abathintekayo bathola imilayezo ezenzakalelayo ebonisa izixhumanisi zomshini lapho umuntu odinga usizo atholakala khona.
Iyunithi ye-alamu ephakathi Pandora DXL 3900 ine-port ehlanganisiwe ye-USB evumela ukuthi uvuselele isofthiwe ngokushesha futhi ngokushelelayo futhi ulungise zonke izakhi ze-alamu. Ukubuyekeza nokuhlelwa kwenziwa ngabachwepheshe ngesikhathi esisodwa ngokufakwa kwinkimbinkimbi.
Izici ze-Car Alarm
Ukuze uthole intengo eyamukelekayo ye-Pandora DXL 3900 uhlelo lwe-alamu, umnikazi wemoto uthola inkimbinkimbi yokuphepha enezihluthulelo ezimbili zokulwa nabaphangi ezizokwenza inqubo yokuphatha uhlelo. Inzwa eyakhelwe ngaphakathi futhi inomthelela izisa umnikazi wemoto ngesikhathi sokuzama ukungena okungagunyaziwe noma ukweba. Isaziso mayelana nezinga lokushaja kwento yebhethri ye-fob eyinhloko igcina isebenza kahle.
Ukubuyiselwa kabusha kwesikrini se-LCD keyfob kwenza kube lula ukusebenza nayo ebumnyameni.
Isixwayiso sokusongela sithunyelwa ngokuzenzakalelayo ku-stick Pandora stick. Le divayisi ibonakala ngokuba khona kwenkumbulo okubangela, okusiza kakhulu futhi kube lula ukusebenza kwayo. Imodi yokulondoloza amandla yekhifob yandisa isikhathi sokusebenza ngaphandle kokuvuselela.
Iwashi le-alamu ifakwe umsebenzi we-alamu, iwashi nokuthola ukushisa. I-Pandora DXL 3900, intengo yayo engama-ruble angu-20 000, ifakwe amafobs amabili ayisihluthulelo, okuwenza kube lula ukusebenza kwayo.
Ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwenkimbinkimbi yokuphepha kunikezwa umsebenzi wokuhlukaniswa kwamanethiwekhi. Imoto ivikelekile ngokweqile ekuqothulweni nasekuqotheni ngokusebenzisa i-algorithm yesimanje. Ibhasi le-CAN elisebenzayo likuvumela ukuba uxhume amadivayisi amaningana engeziwe ohlelweni. Ukusekela cishe wonke amabhasi adijithali akhona okwenza kube lula ukufaka ama-alamu e-Pandora ezimotweni zanoma iyiphi into nokwenza. I-voltage ye-inthanethi ye-inthanethi yebhodi ilawulwa nge-system ekhethekile yinkimbinkimbi.
I-car alarm Pandora inomklamo wendawo yonke, elula kakhulu inqubo yokufaka. Kungenzeka ukuqinisekisa ukuvikelwa kwemoto ekungeneni okungagunyaziwe ngesistimu yezilungiselelo eziguquguqukayo. Ngemuva kokuvala ukushisa, iminyango yemoto ivuliwe ngokuzenzekelayo.
Umklamo olula we-complex complex ukuvumela ukuthi ifakwe ngabaphathi abangenalo ulwazi olufanele namakhono. Izakhiwo eziphezulu zekhwalithi zisetshenziselwa ukukhiqizwa kwenkimbinkimbi yokuphepha, okuqinisekisa impilo yayo yesikhathi eside, ukwethembeka nokuqina.
I-alamu yemoto ehlelwe yi-receiver ekhethekile ivumela ukwandisa ukunemba kokuma imoto. Efonini ephathekayo exhunywe ohlelweni lokuvikela, imilayezo ithunyelwa ngesimo sesistimu kanye nokubangela izinzwa zomsindo nezimpembelelo.
Isistimu "Izandla zamahhala" ikuvumela ukuba ususe masinyane bese ubeka imoto ngaphansi kokuqapha. I-trunk ne-bonnet sensors zixhunywe kwimiphumela ehlukene yeyunithi yokubonisa iPandora, okwenza kube lula ukufaka nokusebenzisa i-alamu.
Izinzuzo ze-DXL 3900
Umsebenzi okhethekile we-alamu yemoto ubonisa imicimbi eqoshiwe yakamuva kanye nesibonakaliso sesikhathi esithile. Izakhiwo zokuphepha zikanye ngesikhathi esisodwa ezizimele ezizimele ezingu-15 zemoto. Ukuphepha kungasethwa njengendawo yonke yokulawula ngesikhathi esisodwa, futhi ngamunye wabo ngokwahlukana.
Umnikazi angenza ngokwezifiso umsindo wezaziso ngokuthandayo: i-DXL 3900 inikeza izibonakaliso ezingu-16 ezihlukahlukene zomsindo. Ngomnyango ngamunye wemoto, ukucaciswa kwayo kubonisiwe, okuyinto eyenza kube lula ukukhiya nokuvula.
Ukubonisa kubonisa izinga lokukhokhisa ibhetri. Injini yemoto ingaqaliswa kude futhi ngokuzenzakalelayo ngokuhamba kwesikhathi, izinga lokushisa elisezingeni eliphezulu, i-timer kanye nomthamo we-in-board network.
Ukuqala okuzenzakalelayo okuhlakaniphile kukuvumela ukuthi uqale injini yemoto endaweni eqondile kanye nokulawula okwamanje kanye nemingcele esemqoka yemoto kanye nombuso wemoto yonke. Lo msebenzi uphendulela uhlelo lwezimoto zePandora DXL 3900 olulodwa lwezinhlelo zokuphepha eziguquguqukayo kakhulu.
Ukusebenzisa ifoni ephathekayo, awukwazi ukubuka kuphela, kodwa futhi ulalele zonke izenzakalo ezenzeka ngemoto. Umsebenzi wokuvimbela injini ekude uyatholakala.
Umthuthukisi wasebenzisa ubuchwepheshe obusha ekukhiqizeni isakhiwo esibonakalayo, okwenza kube lula ukunciphisa izinga lomsindo phakathi nokusebenza kwesistimu. Umzimba we-alamu yemoto wenziwe ngeplastiki eyodwa, okuvikela i-electronics ngaphakathi kuwo amanzi, ukungcola nothuli, okukhulisa kakhulu impilo yemoto.
I-interface edidiyelwe yandisa indawo yokulawula imoto ye-alamu. Umsebenzisi ukwaziswa ngezixwayiso kwimodi yokuzenzakalelayo. Ukubambisana nokuzihlukanisa kwemoto kungenziwa ngezihluthulelo ezahlukene, okwandisa ukuphepha kwemoto ngenkathi kusebenza uhlelo lwe-alamu.
Intengo ye-Pandora DXL 3900 ingenye yezinzuzo zalesi simiso se-alamu yemoto. Uhlelo lwe-alamu "Pandora" ngakwesokudla lubhekwa njengenye yezinhlelo zokuphepha ezinokwethenjelwa kakhulu, okuhlinzeka ukuvikelwa kwemoto.
Kuhle umshini wokuwasha: akhethe ubuchwepheshe bamuva
Esakhelwe ngaphakathi emshinini ikhofi - indlela eya sindiso ekuseni
Isakhiwo ukungqubuzana njengoba isisekelo zokuvimbela yayo kanye nesinqumo ekuseni
Aleks Delardzh - protagonist we ifilimu "A Clockwork Orange"
Airlines Bulgarian - induduzo nokwethenjelwa